प्रेम आले र किसान श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कार दिइदैँ!:: Mero Desh
प्रेम आले र किसान श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कार दिइदैँ!
Published on: १७ आश्विन २०७८, आईतवार ०७:२३
काठमाडौं, १७ असोज । कुनै अप्रत्याशित निर्णय भएमा बाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रेम आले र किसान श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गर्ने भएको छ । नेकपा एमाले विभाजन हुँदा दुवैजनाले माधवकुमार नेपाललाई अन्तिम समयमा साथ दिएका थिए ।
उनीहरुको साथलाई धेरैले आश्चर्य मानेका थिए ।प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । उनीहरु लामो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्म ओलीको साथमा थिए । आले त ओली सरकारमा वनमन्त्री समेत बनाइएका थिए ।आलेले पर्यटन र श्रेष्ठले उद्योगमन्त्री पाउने विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
दुवैलाई मन्त्री बनाउन माधव नेपालले नै अडान लिने बुझिएको छ ।महिलाबाट रामकुमारी झाँक्री मन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः भएको छ । झाँक्रीले शिक्षा मन्त्रालय पाउने बुझिएको छ । उनले माधव नेपाललाई साथ दिदै आएकी छिन् । उनी ओलीवि,रुद्ध ख,रो रुपमा उत्रिएर चुनौती झेलेकी नेतामा पर्छिन् ।
वि,रोध खतिवडा पनि मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको छ । उनको नाममा विगतमै सहमति भए को छ । खतिवडा पटक पटक सांसद बनेपनि मन्त्री बनेका थिएनन् ।राष्ट्रिय सभाका सांसद शेरबहादुर कुँवर पनि मन्त्री बन्ने सूचीमा छन् । विगतमा अछामबाट चुनाव जितेका उनी पछिल्लो समय राष्ट्रियसभामा छन् ।Riportersnepal bata